Makambani Opindawo Muhurongwa hweKutenga Nhomba yeCovid-19
Vemabhizinesi vaparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba vachishanda pamwe chete nehurumende nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Vemabhizinesi vaparura chirongwa chinonzi Business Preparedness, Prevention and Response to Covid -19 kana kuti BPPRI kuti vabatsirane nehurumende kudzikisa huwandu hwevanobatwa neCovid-19 kuburikidzanekutenga nhomba nezvimwe zvekushandisa muzvipatara kurwisa chirwere cheCovid-19.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi nhasi muHarare, sachigaro weBPPRI, Amai Getrude Mashonganyika, vati vemabhizimusi vanoda kuti dambudziko reCovid-19 ripere kuitira kuti mabhizinesi avo abudirire izvo zvakavasunda kuti vatengewo nhomba dzeCovid-19 kuitira kuti nyika ikurumidze kuva nehuwandu hunotarisirwa hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose, kana kuti herd immunity.
Kambani yeCIMAS ndiyo ichange ichitungamirira vemabhizimusi muchirongwa chekutengwa kwenhomba idzi.
Vachitaura pachiitiko ichi, sachigaro weCimas, Amai Emma Fundira, vatiwo chinangwa chavo ndechekuti vanhu vakawanda vazvidzivirire kuchirwere chinouraya ichi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano, Dr John Mangwiro, vatiwo vafadzwa zvikuru nekubatana kwemabhizimusi nehurumende mukurwisa chirwere cheCovid-19
VaMangwiro vatiwo vari kutarisira kuti makambani aya achapawo veruzhinji, kunyanya kunzvimbo dzakasarira shure, ruzivo pamusoro pezvakanakira kubaiwa kwenhomba.
VaMangwiro vatiwo hurumende yakasarudza kushandisa nhomba yeSinopharm neSinovac nedzimwewo nekuti ndidzo dzinogona kuchengetedzeka zvakanaka munyika.
CIMAS inoti vemabhizimusi vakaisa madhora ekuAmerica miriyoni imwe chete kutsigira chirongwa chekutengwa kwenhomba.
Nezuro, vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mana nevashanu, 17 345, vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvisere nemakumi maviri nemumwe chete, 388 21.
Vanhu zvuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe, 6 729, vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri, 69 992.
Zimbabwe iri kushandisa mishonga yeSinovac neSinopharm kubaya vanhu, kunyange hazvo World Health Organization ichiti haisati yapa mishonga iyi chitambi chekuti ishandiswe kuruzhinji rwevanhu.
Zimbabwe inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi.